जब विवाहकै दिन दुलहीको रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ आयो... - दर्पण संसार
जब विवाहकै दिन दुलहीको रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ आयो...
२०७७ मंसिर २२, सोमबार ०२:४१ बजे
भारत- भारतको राजस्थानस्थित बारां जिल्लामा बेहुली कोरोना संक्रमित भएपछि पीपीई लगाएर विवाह गरिँदै।भारतको राजस्थानमा पर्ने बारां जिल्लामा अनौठो तरिकाले विवाह गरिएको छ। कोभिड उपचार केन्द्रमा मण्डप बनाएर विवाह गरिएको हो।
दुलहा–दुलही, उनका परिवार तथा पण्डितले पीपीई किट लगाएर वैवाहिक प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्।
वास्तवमा केलवाडा कस्बेस्थित एक घरमा विवाहको तयारी भइरहेको थियो। त्यही दिन बेहुली र उनकी आमाको रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ आएका हुन्।
त्यसपछि केटीको परिवारलाई लाग्यो कि अब विवाहका सारा कार्यक्रम रोक्नुपर्छ। जन्ती कसरी आउने? कसरी विवाह गर्ने? केटी पक्षले स्थानीय अधिकारीलाई यो कुरा बतायो।
त्यसपछि स्थानीय कोभिड उपचार केन्द्रमै मण्डप बनाउने निर्णय भयो। अनि बेहुला, बेहुली, बुबा, आमा, पण्डित सबैले पीपीई किट लगाए। यसपछि वैवाहिक संस्कार पूरा गरियो। तर विवाहमा अन्य आफन्त सहभागी हुन सकेनन्। बरु कोभिड उपचार केन्द्रका डाक्टर र कर्मचारी सहभागी भए।
छतरंग निवासी युवती र दान्ताका एक शिक्षकबीच विवाह गर्ने निधाे भएको थियो। केटीको परिवारका केही सदस्यले २ दिनअघि कोरोना परीक्षणका लागि नमुना दिएका थिए। तर विवाहकै दिन केटी र उनकी आमामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यसपछि सुरक्षित ढंगले विवाह गरिएको भारतीय पत्रिका दैनिक भास्करले जनाएको छ।